Cycloastragenol (CAG) inozivikanwawo seT-65 ndeye yakasikwa tetracyclic triterpenoid yakawanikwa kubva ku Astragalus membranaceus chirimwa. Yakatanga kuwanikwa riini Astragalus membranaceus dhizaini yaive ichiongororwa neayo anoshanda zvigadzirwa ane anti-kukwegura zvivakwa.
Cycloastragenol inogona zvakare kutorwa kubva kuAstragaloside IV kuburikidza nehydrolysis chiito. Astragaloside IV ndicho chinhu chikuru chinoshanda mukati Astragalus membranaceus mishonga. Kunyangwe Cycloastragenol uye Astragaloside IV zvakafanana mune yavo makemikari chimiro, cycloastragenol yakareruka mumorekuru uremu kupfuura Astragaloside IV. Nekudaro, Cycloastragenol inoshanda zvakanyanya nekuda kwakawanda bioavailability uye nekudaro yakakwira metabolism ye cycloastragenol. Iyo yakakwira metabolism yecycloastragenol inozivikanwa mukati mematumbo epithelial kuburikidza nekushambadzira kwepasipo.
Iyo yemakwenzi yeastragalus yakashandiswa semushonga wechiChinese wechivanhu kwemazana emakore uye iri kushandiswa nanhasi. Astragalus chirimwa chave chichishandiswa nekuda kwayo kunobatsira mhedzisiro inosanganisira anti-bhakitiriya, anti-kupisa pamwe nekukwanisa kuwedzera hutachiona.
CAG inoratidzirwa sechinhu chinopesana nekukwegura chinosimudzira chiitiko cheiyo enzyme telomerase uye kupora kwemaronda. Parizvino ndiyo homboni huru inozivikanwa yekukonzera telomerase muvanhu, nekudaro tarisiro yakakura yekuwedzera yekuwedzera budiriro.
Cycloastragenol inozivikanwa se telomerase activator, iyo inoita basa rekuwedzera kureba kwetelomeres. Telomeres makomba ekudzivirira anoumbwa nekudzokorora kwe nucleotide kumagumo echromosome. Aya maTelomere anova mapfupi mushure memasero ese ekuparadzanisa ayo anoita kuti sero senescence uye kudzikira Kupfuurirazve, iyo telomeres inogona zvakare kupfupiswa ne oxidative kusagadzikana.
Uku kupfupisa kwakanyanya kwetelomeres kunoenderana nekukwegura, kufa uye zvimwe zvinokanganisa zvine chekuita neag. Neraki, iyo telomerase enzyme inokwanisa kuwedzera kureba kwetelomeres aya.
Kunyangwe paine pasina ongororo dzakadzama kuratidza kugona kwecycloastragenol kuwedzera hupenyu, inovimbisa yekurwisa-kukwegura komponi. Yakave yakaratidza kubvisa zviratidzo zvekukwegura kusanganisira mitsara yakanaka uye makwinya. CAG inogona zvakare kudzikisira kutyisidzira kwekuvandudza kusagadzikana kwakadai saPasinson, Alzheimer's, uye cataract.
Pasinei nezvakawanda cycloastragenol hutano hunobatsira, pane kunetsekana kuti zvinogona kukonzeresa kugomarara kana kuwedzera kenza Nekudaro, zvimwe zvidzidzo zvakaitiswa nezvidzidzo zvemhuka zvinomiririra mabhenefiti ecycloastragenol pasina chiitiko checancer.
Cycloastragenol poda yekutengesa inowanikwa zviri nyore online uye inogona kutengwa kubva kune mazhinji anozivikanwa cycloastragenol vatengesi.
Kunyangwe, iyo yakawanda cycloastragenol hutano mabhenefiti yakaratidzirwa, ichiri nhengo nyowani iri pasi peongororo. Uyezve, cycloastragenol mhedzisiro haina kunyatso kujeka, saka inofanira kushandiswa nekuchenjerera.
Cycloastragenol inonzi triterpenoid saponin komputa yakabva pamudzi weAstragalus mishonga. Astragalus membranaceus chirimwa chave chichishandiswa muchinyakare Chinese mushonga (TCM) kweanopfuura makore 2000 uye uchiri kushandiswa mukugadzira mishonga.
Iyo yemakwenzi yeastragalus yave ichizivikanwa nekugona kwayo kwekuvandudza hutachiona, kuchengetedza hupenyu, kuita senge diuretic pamwe neayo humwe hutano zvivakwa senge anti-hypersensitivity, antibacterial, Anti-aging uye anti-kushushikana mabhenefiti.
Cycloastragenol inowanzozivikanwa se TA-65 asi zvakare yakatumidzwa kunzi Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, uye Astramembrangenin. Cycloastragenol kuwedzera inonyanya kuzivikanwa seanorwisa-kukwegura mumiriri, zvisinei, mamwe macycloastragenol ehutano mabhenefiti anosanganisira kuwedzera immune immune, anti-kupisa uye anti-oxidative zvivakwa.
Cycloastragenol uye Astragaloside IV
Ose maviri cycloastragenol uye Astragaloside IV anoitika zvakasununguka mune iyo astragalus chirimwa chinobviswa. Astragaloside IV ndiyo yekutanga chinhu chinoshanda mukati astragalus membranaceus, zvisinei, zvinoitika muhuwandu hweminiti mumudzi. Maitiro ekuburitsa aya saponins, cycloastragenol uye astragaloside IV, zvinowanzoomera nekuda kwenzvimbo yepamusoro yekuchenesa inodiwa.
Izvo zvose cycloastragenol uye astragaloside IV inotorwa kubva kuastragalus herb, cycloastragenol inogona zvakare kuwanikwa kubva kuastragaloside IV kuburikidza nehydrolysis maitiro.
Aya macompound maviri ane akafanana makemikari chimiro, zvisinei, cycloastragenol yakareruka mumorekuru uremu kupfuura astragaloside IV uye zvakare yakawanda bioavailable.
Iyo Mashandiro Ekuita kweCycloastragenol
i. Telomerase activation
Telomeres inodzokorora nucleotide kumagumo emakromosomes ane mitsara uye akasungwa neimwe seti yemapuroteni. Telomeres zvakasununguka ipfupi neese maseru akapatsanurwa. Telomerase, ribonucleoprotein yakaoma ine makemikari anodzosera kumashure transcriptase (TERT) uye telomerase RNA chikamu (TERC) inorebesa ma telomere. Sezvo iro rakakosha basa remaomereomere kuchengetedza ma chromosomes kubva mukubatana uye kudzikisira, masero anowanzoziva matereomere akapfupika seDNA yakakuvadzwa.
Cycloastragenol telomerase activation mhedzisiro yekuwedzera kwetelomeres iyo inoratidzawo mhedzisiro inobatsira.
ii. Inowedzera lipid metabolism
Lipids inowanzoita sechitoro chesimba mumiviri yedu. Nekudaro, zvakawandisa zvea lipids zvinogona kukuvadza hutano hwedu.
Cycloastragenol inosimudzira hutano lipid metabolism kuburikidza akasiyana lipid metabolism biomarkers.
Kutanga, pamadosi mashoma, CAG inoderedza macytoplasmic lipid madonhwe mu3T3-L1 adipocytes. Kechipiri, kana ichishandiswa pamadosi epamusoro, CAG inotadzisa kupatsanurwa kwe3T3-L1 preadipocytes. Chekupedzisira, CAG inogona kukonzera calcium kubuda mu3T3-L1 preadipocytes.
Sezvo yakakwirira intracellular calcium inogona kudzvinyirira adipocytes kusiyanisa, CAG inounza chiyero mu lipid metabolism nekukurudzira calcium kubuda.
III. Antioxidant basa
Kushushikana nekushushikana ndiko kunokonzeresa kwezvirwere zvakawanda uye zvakare sero senescence. Kushushikana nekushushikana kunoitika kana paine kuwanda kwemahara radicals mumuviri.
Cycloastragenol inoratidza anti-oxidative zvivakwa nekusimudzira iyo antioxidant kugona. Iyi antioxidant chiitiko chakabatana neboka rehydroxyl rinowanikwa muCAG.
Uyezve, kushushikana kweiyo oxidative ndicho chikonzero chikuru chekutapudza kwetomere, nekudaro CAG telomere dziviriro inotorwa kubva kune ese ari maviri antioxidant chiitiko uye telomerase activation.
Iv. Anti-kuzvimba chiitiko
Nepo kuzvimba iri nzira yechisikigo iyo iyo muviri unorwa nehutachiona kana kukuvara, kusingaperi kuzvimba kunokuvadza. Kuzvimba kusingaperi kunosanganisirwa nematambudziko mazhinji senge pneumonia, chirwere cheshuga, kusagadzikana kwemoyo uye arthritis.
Cycloastragenol powder inoratidza anti-kupisa zvivakwa. Iwo anti-anogumbura mabhenefiti ecycloastragenol ari kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kutadzisa lymphocyte kuwanda uye kugadzirisa AMP-activated protein kinase (AMPK) phosphorylation.
i.Cycloastragenol uye immune system
Cycloastragenol inogona kubatsira kugadzirisa hutachiona kuburikidza nekusimudzira kuwanda kweT lymphocyte. Iko kugona kwecycloastragenol yekuwedzera kuti ishandise telomerase inoita kuti ikurudzire kugadziriswa kweDNA ichitungamira o kukura uye kukwirisa kwetelomere.
ii.Cycloastragenol uye Anti-kuchembera
Cycloastragenol anti-kuchembera zvivakwa ndizvo zvinonyanya kufarira nhasi kutsvagurudza. CAG yakaratidzirwa kunonoka kuchembera muvanhu pamwe nekuderedza zviratidzo zvekukwegura zvakaita semakwenzi nemitsetse yakanaka. Cycloastragenol anti-kuchembera chiitiko chinowanikwa kuburikidza nenzira dzakasiyana dzakasiyana. Iyo cycloastragenol anti-kuchembera nzira dzinosanganisira;
Kurwisa oxidative kusagadzikana
Oxidative kushushikana kunoitika zvakasikwa kana paine kusaenzana pakati pemahara radicals uye antioxidant mumuviri. Kana ikasadzorwa, kushushikana kweiyo oxidative kunogona kukurumidza kukwegura uye kutungamira kune isingagumi mamiriro akaita segomarara, chirwere chemoyo uye chirwere cheshuga.
Cycloastragenol astragalus yakatorwa inoyevedza antioxidant komponi uye zvakare inovandudza kugona kweanowanzove aripo antioxidants. Izvi zvinobatsira kunonoka kukwegura uye zvakare kudzivirira kuitika kwezvematambudziko ane chekuita nezera.
Cycloastragenol inoshanda seye telomerase activator
Sezvakakurukurwa muchikamu chiri pamusoro nezve mashandiro ekuita, cycloastragenol inobatsira kurebesa telomeres. Izvi zvinoita basa rakakosha mukuona kuenderera kwekuparadzaniswa kwemasero nekudaro kunonoka kuchembera. Izvi zvinobatsirawo mukuchengetedza nhengo dzemuviri dzichishanda nemazvo.
Cycloastragenol inopa dziviriro kubva ku UV mwaranzi
Kana munhu akaziviswa nechiedza chenguva kwenguva yakareba maseru emuviri anogona kukuvara uye semhedzisiro anokundikana kushanda nemazvo. Izvi zvinoguma kune chimiro chekwegura kusati kwasvika kunonzi foto-kuchembera.
Cycloastragenol powder inouya kununura sezvo ichiratidzwa kuchengetedza ganda kubva kune zvinokuvadza zveiyo UV mwaranzi.
Cycloastragenol inorambidza protein glycation
Glycation inzira inoshandiswa neshuga yakadai seglucose kana fructose kubatanidza kune lipid kana protein. Glycation ndeimwe yezvigadzirwa zvechirwere cheshuga uye yanga ichibatanidzwa nekukwegura pamwe nezvimwe zvinetswa.
Cycloastragenol yekuwedzera inobatsira kudzivirira kukwegura nekuda kweglycation nekudzivirira kuumbwa kwezvinhu zveglycation.
III.Izvo Zvimwe Zvichida Hutano Kubatsirwa kweCycloastragenol:
Cycloastragenol kenza kurapwa
Iyo cycloastragenol kenza yekurapa kugona inoratidzwa nekukwanisa kwayo kuparadza kenza maseru, kugadzirisa hutachiona pamwe nekudzivirira imwe kubva mukukuvara kwekuita chemotherapy.
Mukudzidza kwevanhu vane kenza yemazamu, cycloastragenol kenza kurapwa kwakaratidzirwa nekukwanisa kwayo kudzikisa kufa neinosvika makumi mana muzana.
Inogona kuchengetedza moyo kubva kukuvara
Cycloastragenol inogona kudzivirira kubva pamwoyo kusagadzikana.
Mune ongororo yemakonzo ane akakonzera kukuvara kwemoyo, cycloastragenol yekuwedzera yakawanikwa kugadzirisa moyo kusagadzikana nekusimudzira kuzvitakura mumasero emyocardial pamwe nekudzvinyirira kutaura kwematrix metalloproteinase-2 (MMP-2) uye MMP-9.
Kubva pane cycloastragenol ongororo, zvinogona kunatsiridza kunaka kwehope. Zvisinei, zvidzidzo zvemakiriniki zvaizodikanwa kuti zvipe humbowo hwakasimba pakukwanisa kwayo kuwedzera kurara.
Inogona kubatsira kurwisa kuora mwoyo
Yakapfupikiswa tomereti yakawanikwa muvanhu vanotambura nehutano hwekushushikana senge nyaya dzekunetseka nezvirwere zvakaita seAlzheimer's.
Mune ongororo yemakonzo mukumanikidza kushambira bvunzo, cycloastragenol yekuwedzera inofambiswa kwemazuva manomwe yakawanikwa kudzikamisa kusafamba kwavo. Izvo zvakaratidzirwa kumisikidza telomerase mune mauroni uye zvakare mumaPC7 maseru, ayo anotsanangura ayo ekurwisa-kuora mwoyo kugona.
Dai kukurumidza kuporesa ronda
Ronda kupora inyaya hombe mune vane chirwere cheshuga. Iyi nzira yekupodza ronda inoitika kuburikidza neakateedzana ezviitiko. Mabasa aya ndeaya; yekuzvimba chiitiko, kugwamba, kudzoreredza epithelium, kuvaka zvakare uye pakupedzisira kudzora maseru emadzinde. Aya epithelial stem masero akakosha mukurapa kweshuga kurapa.
Inotaridzwa kuti kuora moyo kwetelomere kunokanganisa kuporesa kwemaronda. Apa panowanikwa cycloastragenol powder kuti igadzirise yakapfupiswa telomere pamwe nekusimudzira kuwanda uye kufamba kwemasero emadzinde. Izvi zvinobva zvabatsira mukugadzirisa ronda nekukurumidza.
Kuvandudza hutano hwebvudzi
Cycloastragenol kuongororwa nevashandisi vega zvinoratidza kuti cycloastragenol inogona kubatsira kudzivirira kurasikirwa kwebvudzi, kusimudzira bvudzi kukura uye kuwedzera bvudzi bvudzi.
Zvimwe cycloastragenol astragalus kubvisa mabhenefiti ndeaya;
Inopa anti-hutachiona chiitiko kurwisa maCD4 + emunhu.
Inovandudza hutano hweganda.
Zvinogona kuvandudza kuona.
Iyo Yakajairwa Dosi yeCcyloastragenol
Mutemo cycloastragenol muyero inenge 10 mg zuva nezuva. Nekudaro, sezvo izvi zviri zvitsva kuwedzera muyero wayo waizotarisana nekushandiswa, zera uye mamiriro ehutano.
Iyi yakajairwa cycloastragenol muyero inofanirwa kuwedzerwa muvanhu vakura vanopfuura makore makumi matanhatu kuti vawane kukwana kwetelomere kukwirisa pamwe nekudzora kukwegura.
Cycloastragenol yakachengeteka here?
Cycloastragenol powder inowanzoonekwa seyakachengeteka pane mamwe madosi masero. Nekudaro, sezvo iri nyowani nyowani kuwedzera izvo zvinogona kuitika cycloastragenol mhedzisiro hazvisati zvazivikanwa.
Iwo mashoma cycloastragenol ongororo pane zvakataurwa mabhenefiti ecycloastragenol haana kukwana zvakakwana kuti abvumire iko kushandiswa kwekushandisa.
Uye zvakare, pane kunetsekana kuti cycloastragenol yekuwedzera inogona kukurumidza kenza nekusimudzira kukura kwemamota. Uku kufungidzira kwekufungidzira kunoenderana nekuti cycloastragenol main mode yekuita iri kuburikidza netelomere kukwirisa. Saka zvinofungidzirwa kuti zvaizovandudza gomarara sero kukura.
Saka zvinokurudzirwa kuti usape cycloastragenol kune varwere vegomarara kudzamara data rakavimbika riwanika maererano nekufungidzira uku uyezve kudzivirira chero isingazivikanwe cycloastragenol chepfu.
Ndekupi Kwatingawane Kwedu Kwakanyanya Cycloastragenol?
zvakanaka, cycloastragenol poda yekutengesa inowanikwa nyore nyore online uye muzvitoro zvakasiyana siyana zvinovaka muviri. Zvisinei, gara uchitsvaga cycloastragenol poda yekutengesa kubva kune yakatenderwa uye inoremekedzwa cycloastragenol vatengesi kuve nechokwadi kuti iwe unowana yakanatswa kwazvo cycloastragenol.
Cycloastragenol powder yakaratidzirwa kuve iine akawanda anobatsira mhedzisiro uye zvakanyanya kudaro cycloastragenol anti-kuchembera zvivakwa. Cycloastragenol telomerase activation ndiyo nzira huru yekuita iyo inowedzerawo telomere. Izvi zvakaratidzirwa mumhando dzakawanda dzemhuka uye zvakare mashoma invitro zvidzidzo.
Makiriniki miedzo yecycloastragenol astragalus kubvisa maitiro pakuwedzera telomere mashoma kwazvo uye nekudaro zvimwe zvidzidzo zvekupa humbowo hwakasimba zvinodikanwa.
Izvo zvinogona kuitika zve TA-65 mukuvandudza kusagadzikana kwemoyo zvakadzama zvakanyanya sezvo zvishoma zvidzidzo zviripo mukutsigira ichi TA-65 chiito.
Kudzidza metabolism ye cycloastragenol mune ruzivo inogona zvakare kugadzirisa pane iripo data pamwe nekufumura chero cycloastragenol chepfu inogona kuitika nekuda kwekuwandisa kuwanda.
Zvimwezve zvidzidzo zvekuongorora kushanda kwecycloastragenol yekuwedzera mune zvakanaka zvakataurwa. Iyo cycloastragenol mhedzisiro mhedzisiro haisati yazivikanwa. Naizvozvo, kutsvagisa kunofanirwa kutungamirwa kusarudza zvinoitika cycloastragenol mhedzisiro pamwe nekubatana nemimwe mishonga.
Mukunzwisisa cycloastragenol hutano bhenefiti, zvinobatsira kuongorora maitiro ari pasi pezviito zveCAG.
Uye zvakare, iyo yakakodzera cycloastragenol dosage inoda zvimwe zvidzidzo kuongorora muyero wakakurudzirwa wemapoka emazera akasiyana. Vakasiyana cycloastragenol vatengesi vanoraira madosi akasiyana ayo anofanirwa kuwiriraniswa kuburikidza nekutsvaga.
Yuan Yao naMaria Luz Fernandez (2017). "Inobatsira Mhedzisiro yeTelomerase Activator (TA-65) Kurwisa Chirwere Chirwere". EC Chikafu 6.5: 176-183.
Wang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., Cai, H., Zhao, Z.-M., & Rwiyo, Y.-H. (2018). Cycloastragenol inovhenekera kuyedza kwemoyo kukuvara mumakonzo nekusimudzira myocardial autophagy kuburikidza nekudzivirira kweAKT1-RPS6KB1 kusaina. Biomedicine & Pharmacotherapy, 107, 1074-1081. doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Zuva, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). Cycloastragenol inopindirana nekuwedzera uye kuwedzera kudzvinyirira mu concanavalin A-induction mbeva lymphocyte pan-activation modhi. Immunopharmacology uye Immunotoxicology, 39 (3), 131-139. doi: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: Cycloastragenol Is A Potent Telomerase Activator muNeuronal Maseru: Zvinokonzeresa Kushushikana Management. Neurosignals 2014; 22: 52-63. doi: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). Cycloastragenol: Inonakidza inoverengeka mumiriri wezvirwere zvine hukama nezera (Ongororo). Ongororo uye Kurapa Mushonga. 16. 10.3892 / etm.2018.6501.
2. Chii chinonzi Cycloastragenol?
3. Iyo Mashandiro Ekuita kweCycloastragenol
4. Kubatsirwa kweCycloastragenol
5.Iyero Dosi yeCcyloastragenol
6. Cycloastragenol yakachengeteka here?
7.Ndokupi Kwatinogona Kuwana Yakanakisa Cycloastragenol?